ပြောင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ (USD) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
အမေရိကန် ဒေါ်လာ (USD)
ပွောငျး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (USD)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (USD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: အီကွေဒေါ, မိုင်ခရိုနီရှား, ပလာအို, ယူနိုက်တက်စတိတ်, ပေါ်တိုရီကို, အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး. အမေရိကန် ဒေါ်လာ ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: greenback, ခေါ, အစိမ်း, မုန့်စိမ်း, smacker, အရိုး, အသေသမ္မတ, scrillas, စက္ကူ.
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ယူရိုEUR€0.824အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.732အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.888အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr8.56အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.6.13အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč21.53အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł3.74အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.27အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.3အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$20.14အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$7.75အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.47အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹73အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.160.65အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.33အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.39အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿29.99အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥6.48အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥103.78အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1103.08အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦381.5အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽75.49အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴28.15
အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ BitcoinBTC0.00003 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ EthereumETH0.000796 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ LitecoinLTC0.00578 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ DigitalCashDASH0.00989 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ MoneroXMR0.00681 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ NxtNXT80.95 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ Ethereum ClassicETC0.137 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ DogecoinDOGE101.06 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ZCashZEC0.0144 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ BitsharesBTS34.65 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ DigiByteDGB30.84 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ RippleXRP2.97 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ BitcoinDarkBTCD3307285.34 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ PeerCoinPPC1.96 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ CraigsCoinCRAIG43726315789.47 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ BitstakeXBS0.582 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ PayCoinXPY937.25 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ ProsperCoinPRC100000000 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ YbCoinYBC0.000285 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ DarkKushDANK30770370370.37 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ GiveCoinGIVE207700000000 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ KoboCoinKOBO169.86 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ DarkTokenDT0.921 အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD သို့ CETUS CoinCETI276933333333.33
2000000 USD to IRR2021-01-25 17:28:24
180700 UAH to USD2021-01-25 17:28:24
147000 CAD to USD2021-01-25 17:26:46
1 RSD to USD2021-01-25 17:24:12
1 RON to USD2021-01-25 17:24:10
1 MAN to JPY2021-01-25 17:23:29
117000 JPY to USD2021-01-25 17:21:35
1 USD to TZS2021-01-25 17:20:10
1000 USD to CAD2021-01-25 17:19:24
8000 MYR to IRR2021-01-25 17:18:51
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Mon, 25 Jan 2021 17:25:01 +0000.